Europe nke Best Christmas Markets Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Europe nke Best Christmas Markets Site Train
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 11/12/2020)
Christmas Markets site Train-enyere gị aka nweta n'ime Christmas spirit na a njem otu n'ime Europe ji mma obodo. Travel ụgbọ okporo ígwè na-eme ka gị na ahụmahụ ndị kasị kpokọtara mgbe! ọtụtụ ụgbọ na-emi odude ke esịt nke obodo center, na-eme na-ejegharị site na ụgbọ okporo ụzọ kacha mfe iru gị ebe. Ma ị na-aga na-ịzụ ahịa n'ihi na onyinye maka ezinụlọ, ịlele na mulled mmanya ma ọ bụ nnọọ ụtọ Christmas ikuku na ndị ị hụrụ n'anya, ị na-n'aka nwere agaghị echefu ezumike. Anyị weere a ole na ole nke Europe ji mma Christmas ahịa ụgbọ okporo ígwè na ị ga-achọ uche.
Otu n'ime ndị kasị kpokọtara ugboro nke afọ ileta Italy bụ n'oge Christmas oge. Were a ụgbọ okporo ígwè na Florence na-ahụ oge ochie ncheta udo na Christmas ọkụ na-esi isi nke amịkpọ chestnuts na ikuku.
Naples na Florence Ụgbọ oloko
A post na-akọrọ site ⓒⓗⓘⓒⓐⓢenvoyage (@chicasenvoyage)
A na-ewu ewu ahịa gaa na Florence bụ Piazza Santa Croce na Florence. Nke a jupụtara mara mma osisi ụlọ na a maara dị ka a omenala German Christmas ahịa. Piazza Santa Croce bụ zuru okè n'ebe bulie pụrụ iche onyinye na obodo nri pụrụ iche.
Akara mmalite nke a Christmas Markets site Train na a ụgbọ okporo ígwè na njem London. London jupụtara Christmas bụ'abụ si November ka January. Gaa na London si oyi wonderland na Hyde Park na-ahụ osisi mma na akụkọ ọkụ, a nnukwu n'èzí ski rink, a feris wịịl, Carol-abụ abụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ime ahịa. E nwere ọtụtụ nta ahịa ịhọrọ site na gburugburu London si National History Museum ebe i nwere ike na-ekpo ọkụ na crisp oyi ikuku na a iko glühwein na ụfọdụ festive nri. Plus, na mma ụgbọ okporo ígwè n'ego ụgbọ na London, ị ga-enwe ụfọdụ mmezi ego n'ihi na ihe shopping!
Aga enchanted Christmas ahịa ụgbọ okporo ígwè!! Berlin bụ nnọọ mfe site na ụgbọ okporo ígwè na Europe nke na-eme ya na zuru okè ebe. Chọpụta German isi obodo ọgaranya na-adọrọ mmasị mere, nakwa dị ka ha iche iche Christmas ahịa, na nke kacha mma n'oge a kara aka shopping, ihe na culinary ụtọ!
Edemede nke Louise Liljestrand kesara (@louiseliljestrand)
Gendarmenmarkt bụ a ga-ahụ! Nke a na ntọlite ​​a ghọtara dị ka otu n'ime ndị kasị ọmarịcha nke Berlin si Christmas ahịa. Nụrụ ụtọ ụfọdụ obodo emeso ndị dị otú ahụ dị ka gingerbread, ṅara n'ọkụ chestnuts, mulled mmanya na sausages maka kacha German Christmas ahụmahụ.
N'ụzọ dị iche na ụfọdụ ibu ahịa na Europe, the Prague Christmas Markets by Train offers more authenticity and comfort. Onye ọ bụla ahịa nwere-agaghị echefu echefu ikuku. Nkeji n'ebe Central ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-gbaa mma osisi huts na Prague si Old Town square. Ebe obodo na ọbịa zukọta maka stocking fillers, osisi ji egwuri egwu, Christmas osisi ịchọ mma, aka-mere ọla, na esi ísì ụtọ kandụl.
Oke nke nri na-aba n'anya na-ere ahịa bụ na-emesapụ aka. Visitors nwere ike na-atụ anya na omenala Czech oriri dị ka barbecued ezi, Czech muffin, conkers, biya, cheta, na ndị ọzọ na-ahụkarị specialties si Old Czech nri. E nwere ihe dị nnọọ pụrụ iche banyere a Christmas ahịa ke Prague. Soro anyị na Twitter na Facebook na-anya maka anyị ọhụrụ na-enye.
Frankfurt ka Prague Ụgbọ oloko
Nwee njem ezumike n'obodo ka ememme Vienna! Vienna bụ obodo nke nostalgia na romance na awade kasị mma nke Christmas Markets na Europe. The ọdụ ụgbọ okporo ígwè bụ naanị nkeji site taxi ma ọ bụ ụgbọ ala site n'etiti obodo nke na-eme Vienna Christmas Markets site Train mfe iru. The kasị ewu ewu ahịa na nke a isi obodo na-ewe ebe Rathausplatz, ebe square na-ọma-udo site n'otu ntabi ọkụ na ya ikpọ Christmas osisi.
Gbalịa mee ihe ndị na-atọ ụtọ ntụmadị na ọdịnala na ato uto dị ka ị na-anya si uloanumaanu na uloanumaanu maka onyinye na decorations, ọ bụla mgbede ndụ opi concerts na-rụrụ si Rathaus mbara ihu, nke a bụ oké ụzọ agwụ a zuru okè ụbọchị.
Mee nke a Christmas otu icheta na-eleta otu nke Europe pụrụ iche Christmas ahịa ụgbọ okporo ígwè. Akwụkwọ gị tiketi online eji anyị ụgbọ Finder na ime ka oké ego tupu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-by-train%2F - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#ahịa #newyear #noel Christmas ChristmasbyTrain